Par Taratra sur 10/11/2018
Hiodina am-pitoerana eo an-dranomasina manodidina ny 300 km atsinanan’i Vohémar eo ilay rivodoza Alcide, mandritra ity faran’ny herinandro ity, raha ny filazan’ny mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampandrianomby.
Amin’ny alahady na alatsinainy any, vinavinaina hizotra any avaratr’i Antsiranana ny diany. Efa mihalevona tsikelikely ity rivodoza any an-dranomasina ity. Heverina ho any amin’ny volana desambra any indray vao mety hisy rivodoza hihaodihaody any an-dranomasina raha ny vinavinan’ny Meteo hatrany. Tsy mbola tokony hiandriaka ireo mpampiasa ranomasina any amin’ny tapany avaratry ny Nosy noho ny rivotra entin’ilay rivodoza.
Tonga nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fifanajana ny mpitantana teto anivon’ny faritra Vakinankaratra ireo delegasion’ny banky foiben’i Madagasikara izay notarihin’ny goverinora ny banky foiben’i Madagasikara, Rasolofondraibe Alain. Nandray azy ireo ny lehiben’ny faritra Vakinankaratra, ny jeneraly Rakotonarivo William. Navohitra nandritra ny fihaonana ny fanokafana masoivohon’ny banky foiben’i Madagasikara ao Vakinankaratra. Nilaza ny fahavononany ny faritra satria dia ho afa-pahasahiranana ny mponina, ary indrindra ireo banky misy ao an-toerana ka ho afaka ny fifezivezena miakatra any Antananarivo. Nilaza ny avy amin’ny faritra fa afaka manome tany hanorenana ny trano raha ilaina izany.
Nisehoana haintrano teny Antohomadinika Atsimo ny 1 novambra lasa teo. Nitondra fanomezana ho an’ireo traboina nahitana fianakaviana 62 ny solontenan’ny ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, ny herinandro lasa teo. Nanolotra vary, fitaovana an-dakozia, savony ho an’ireo traboina ny tomponandraikitra. Nanararaotra koa ireto farany nijery ifotony ny zava-misy teny an-toerana ary nanao fanentanana ho an’ireo mponina mba tsy hiverimberenan’ny loza, tahaka izao, intsony.